4 Mgbe ihe ndị a gasịrị, ahụrụ m, ma, lee! ọnụ ụzọ e meghere emeghe n’eluigwe, olu mbụ m nụrụ na-ada ka opi.+ O wee gwa m okwu, sị: “Gbagote n’ebe a,+ m ga-egosi gị ihe ndị na-aghaghị ime.”+
2 Mgbe ihe ndị a gasịrị, mmụọ nsọ malitere ozugbo iduzi m: ma, lee! otu ocheeze+ dị n’eluigwe,+ e nwekwara onye nọ ọdụ n’ocheeze ahụ.+
3 Onye ahụ nke nọ ọdụ na-egbuke dị ka+ nkume jaspa+ na nkume dị oké ọnụ ahịa nke na-acha ọbara ọbara, eke na egwurugwu+ nke na-egbuke dị ka emerad+ gbakwara ocheeze ahụ gburugburu.
4 Ocheeze iri abụọ na anọ gbakwara ocheeze ahụ gburugburu, ahụkwara m ka ndị okenye+ iri abụọ na anọ+ ndị yi uwe elu na-acha ọcha+ nọ ọdụ n’ocheeze ndị a,+ ha kpukwa okpueze ọlaedo n’isi ha.+
5 Àmụ̀mà+ na olu na égbè eluigwe+ si n’ocheeze ahụ na-apụta; oriọna asaa+ ndị na-enwu ọkụ dịkwa n’ihu ocheeze ahụ, oriọna ndị a pụtara mmụọ asaa+ nke Chineke.
6 E nwekwara ihe a pụrụ ịkpọ oké osimiri nke yiri enyo,+ nke dị ka kristal, n’ihu ocheeze ahụ.
N’etiti ocheeze ahụ nakwa gburugburu ocheeze ahụ, e nwere ihe anọ dị ndụ+ ndị jupụtara n’anya ma n’ihu ma n’azụ.
7 Ihe nke mbụ dị ndụ dị ka ọdụm,+ ihe nke abụọ dị ndụ dị ka nwa oké ehi,+ ihe nke atọ dị ndụ+ nwere ihu yiri ihu mmadụ, ihe nke anọ dị ndụ+ dị ka ugo nke na-efe efe.+
8 Nke ọ bụla n’ime ihe anọ ahụ dị ndụ+ nwere nku isii;+ ha jupụtara n’anya+ gburugburu ha nakwa n’okpuru ha. Ha adịghị ezu ike ehihie na abalị ka ha na-asị: “Nsọ, nsọ, nsọ ka Jehova+ Chineke, Onye Pụrụ Ime Ihe Niile dị,+ bụ́ onye dịbu adị na onye dị adị+ na onye na-abịa.”
9 Mgbe ọ bụla ihe ndị ahụ dị ndụ nyere Onye ahụ nọ ọdụ n’ocheeze+ otuto na nsọpụrụ na ekele,+ bụ́ Onye na-adị ndụ ruo mgbe niile ebighị ebi,+
10 ndị okenye iri abụọ na anọ+ ahụ na-ada n’ala n’ihu Onye ahụ nọ ọdụ n’ocheeze ma kpọọrọ Onye ahụ na-adị ndụ ruo mgbe niile ebighị ebi isiala,+ ha na-atọgbọkwa okpueze ha n’ihu ocheeze ahụ, sị:
11 “I kwesịrị ekwesị, Jehova, bụ́ Chineke anyị, ịnata otuto+ na nsọpụrụ+ na ike,+ n’ihi na ọ bụ gị kere ihe niile,+ ọ bụkwa n’ihi uche gị+ ka ha ji dịrị, ọ bụkwa ya mere e ji kee ha.”+
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D66%26Chapter%3D4%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl